Sawirro: Tigrayga oo soo bandhigay 6,000 askari oo laga qabsaday Ethiopia - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Tigrayga oo soo bandhigay 6,000 askari oo laga qabsaday Ethiopia
Sawirro: Tigrayga oo soo bandhigay 6,000 askari oo laga qabsaday Ethiopia
Mekelle (Caasimada Online) – Kumanaan askar maxaabiis ah oo laga qabsaday ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ayaa Jimcihii la marsiiyey waddooyinka magaalada Mekelle ee caasimadda Tigray, ayada oo shacabkuna ay dhinacyada ka taagan yihiin oo mashxaradeynayaan.
Soo bandhigista maxaabiista ayaa looga dan lahaa in lagu beeniyo hadal uu Arbacadii jeediyey ra’iisul wasaare Abiy Ahmed oo sheegay in wararka ku saabsan in ciidamada laga adkaaday ay yihiin been, taa beddelkeedna ay ku dhowaaqeen xabad-joojin.
Ayada oo ay wehliyaan ciidamada Tigrayga, askarta maxaabiis ahaanta loo qabsaday ayaa afar maalmood lagu hayey xerooyin kahor inta aan waddooyinka lasoo marsiin Jimcihii.
Waxa uu sheegay in saraakiisha Tigrayga ay xiriir la leeyihiin hay’adda laanqeyrta cas, islamarkaana ay dhowaan sii deyn doonaan saraakiisha darajooyinka hoose, balse ay sii hayn doonaan kuwa darajooyinka sare.
Sida ku cad Xeerka Geneva, maxaabiista dagaalka waa in la siiyaa cunno iyo dhar, lagana ilaaliyaa rabshadaha iyo cabsi gelinta. Illaa iyo hadda ma jiraan wax tilmaamo ah oo muujinaya in askarta laga qabsaday Ethiopia loola dhaqmay si xun.